Ukuze umzimba womuntu zonke izinqubo ezibalulekile wabe evamile, wayedinga amavithamini namaminerali. Iningi lazo akakwazi ukuthuthukisa noma eba izinto eziningi ezincane kakhulu - umthombo enkulu amavithamini namaminerali kubantu ukudla. Kodwa ukudla kwabo ngaso sonke isikhathi esanele, ngakho-ke Kunconywa ukuthatha a izakhiwo multivitamin, enye yazo "Centrum".
Ukuze lokho nokuthi ubani odinga "Centrum" amavithamini? Izibuyekezo uzithatha abantu bethi kuphumelela kakhulu nokwelashwa polyhypovitaminosis noma eside ukwelashwa kwama-antibiotic.
Ngoba lokhu Vitamin complex edayiswa Pharmacy ngaphandle kadokotela, wonke umuntu angakwazi ukuthatha siqu "Centrum" amavithamini yabo. Nokho, ochwepheshe Guest, batusa ukuthi ngaphambi kokuthatha lezi amaphilisi xhumana nodokotela izeluleko amathiphu ambalwa ukukhumbula.
Awukwazi ukuthatha imithi njalo uma ziqhathaniswa Kunconywa, noma ebulilini, ngoba okweqa amavithamini ngoba umzimba akuyona ayiyona ingozi kancane kakhulu. Thatha kubo njalo nayo Kunconywa. Kungcono ukuphuza inkambo amavithamini: ukuthatha izinyanga 1-2, bese - kwezinyanga ezimbalwa ukuthatha ikhefu. Ebusika futhi entwasahlobo, lapho umzimba sintula kwelanga nokudla Vitamin-ocebile kungakhuphula izinga ukwamukelwa izinyanga kuze kufinyelele 3.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi yimuphi izakhiwo simangaliso Ungashintshanisa ukudla olinganiselayo futhi unempilo, ngakho-ke ungakhohlwa mayelana izithelo, imifino, imikhiqizo yobisi, inhlanzi nenyama.
Naphezu ukusetshenziswa eziyinkimbinkimbi "Centrum" -vitamin, ukubuyekezwa wathatha abantu bakhe ukukhuluma mayelana nokuhlukumeza okunamandla okuba nemiphumela engemihle. Kwezinye izimo, ama-multivitamin kungaba baxabane nomzimba, benamandla kangaka, ukuthi kudingeka usizo lwezokwelapha. Uma ngokushesha ngemuva kokuthatha nobunzima iphilisi ukuphefumula, kuzoba ukuvuvukala ebusweni, izindebe nolimi, isifuba - ngokushesha shayela "ambulensi."
Ngenhlanhla, le miphumela emibi zomuthi awavamile. Okuningi kaningi bangakwazi avele ngendlela uhudo noma ukuqunjelwa, ichaza ukushintsha kombala indle kanye nomchamo. Ukuze ususe lezi zimpawu, unga "Centrum" amavithamini (izibuyekezo uqinisekise lesi) babambeke ukudla. Kunoma ikuphi, uqale ukuthatha leli eziyinkimbinkimbi, ngokucophelela ukulalela umzimba wakho, ikakhulukazi uma uphuza amavithamini kanye nezinye izidakamizwa - nandaba, kadokotela noma non-kadokotela.
Ngokuthakazelisayo, ukuntuleka kwamavithamini emzimbeni kungabonwa unyaka wonke, ngisho inani elihle kunawo, inkathi ehlobo-ekwindla. Ngokuyinhloko asinalo ngokwanele Vitamin C, B1, B2, B6. Futhi uma sifaka ukuntula iodine, nensimbi, calcium, selenium nezinye izakhi mkhondo, isithombe kuyoba kucindezele ngendlela efanayo. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuswela amavithamini namaminerali is cishe bonke abantu, kungakhathaliseki isimo sabo senhlalo nengcebo.
Ukuze unikeze engayitholi olinganiselayo amavithamini, macro- futhi microelements emzimbeni lomuntu ngamunye, izindawo ezikhethekile eyenzelwe eyehlukene. Ngakho, kukhona izinhlobo ezintathu amavithamini "Centrum": abadala - "Centrum A kuya Zinc", "Centrum" izingane ezineminyaka engu-2 ubudala futhi "Centrum" ngabantu abadala abangaphezu kweminyaka engu-mahlanu. Ngaphezu kwalokho, watusa 'Centrum "nge lutein, izibuyekezo zibonisa ukuthi ukuthatha eyodwa kuphela ithebhulethi zomuthi ngelanga kuqinisa amasosha omzimba izingane nabesifazane abakhulelwe, kwandisa ukusebenza kahle, inikeza umzimba izakhi ezibalulekile.
Ukuhlela sokukhulelwa, abesifazane abakhulelwe noma ukuncelisa ibele ziphuze Inxanxathela "Centrum Materna DHA." Uphenyo abesifazane abaye babhekana umphumela zonke saleli vithamini emuthini ngokwayo, abonisa ukulondeka kwawo ngokugcwele. capsule multivitamin, ngaphezu ukudla okwenziwe wanelise isidingo bonke micronutrients phakathi nokukhulelwa kanye lactation. Into kuphela okufanele alikhumbule: the ngokweqile of umthamo watusa ungakulimaza kokubili owesifazane kanye nengane.
Uqondeni "a priori" ngolimi lwanamuhla?